npmm | MyanmarNewsPlanet
Home Authors Posts by npmm
npmm - November 15, 2019
” Myanmar Idol ပြိုင်ပွဲကြီးကြောင့် ခွဲခွာခဲ့ရတဲ့ ဖခင်ဖြစ်သူနဲ့ ပြန်လည်ဆုံစည်းခဲ့ရတဲ့ ထက်အဉ္ဇလီ “ Myanmar Idol ရဲ့ပရိသတ်တွေကြား အပြုံးချိုချိုလေးတွေနဲ့သီချင်းတွေကို တန်ဆာဆင်ပြီးသီဆိုကာပရိသတ်တွေရဲ့အသည်းနှလုံးကိုသိမ်းပိုက်ထားသူလေးဖြစ်တဲ့ထက်အဉ္ဇလီကတော့ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်Rock Weekယှဉ်ပြိုင်ဖျော်ဖြေမှုပွဲနေ့မှာသူ(၄)တန်းအရွယ်ထဲကခွဲခွာခဲ့ရတဲ့ဖခင်ဖြစ်သူကို ”ပါးပါးနဲ့လည်းတွေ့ချင်တယ်၊ညီမလေးကလည်းပါးပါးကိုလွမ်းနေတယ်။သမီးကိုဆက်သွယ်ပေးပါ”ဆိုပြီးသူဆီဆက်သွယ်ဖို့ပြောခဲ့ပါတယ်။ ထက်အဉ္ဇလီဟာမနေ့ညကယှဉ်ပြိုင်သီဆိုခဲ့တဲ့ “အမှတ်တရတက္ကသိုလ်”သီချင်းများကို သီဆိုရတဲ့ပွဲမှာနိုင်ငံကျော်အဆိုတော်အေးချမ်းမေရဲ့“ကျောင်းဖွင့်ချိန်” သီချင်းလေးကိုကျောင်းပြီးအောင်မတတ်ခဲ့ရလို့တက္ကသိုလ်သီချင်းဆိုရတာအခက်အခဲရှိပေမယ့်ခံစားသက်ဝင်မှုကောင်းကောင်းနဲ့ သီဆိုနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ယှဉ်ပြိုင်သီဆိုအပြီးအမှာခွဲခွာခဲ့ရတဲ့ ဖခင်ဖြစ်သူနဲ့ ပြန်လည်ဆုံစည်းခဲ့ရတဲ့အကြောင်းကို “Hello…အချစ်တို့ရေ ထက်သတင်းကောင်းလေးပြောချင်လို့ပါရှင့်မနေ့ကပြိုင်ပွဲမှာထက်နဲ့လေးတန်းလောက်ထဲကခွဲခွါခဲ့ရတဲ့ထက်အရမ်းသတိရနေခဲ့ရတဲ့ပါးပါး(အဖေ)နဲ့ပြန်ဆုံနိုင်ခွင့်ရခဲ့ပါပြီရှင့်ထက်ဝမ်းသာလို့မဆုံးပါဘူးရှင့်အားလုံးလည်းထပ်တူပျော်ရွှင်ကြမယ်ထင်ပါတယ်ရှင့်”လို့သူရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမှဖော်ပြထားပါတယ်။ CeleGabar ပရိသတ်ကြီးရေထက်အဉ္ဇလီကတော့Myanmar Idol...
ကယားသူေလး ထက္အၪၨလီဟာ Myanmar Idol Season4မွာ ပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္ေနတဲ့ ၿပိဳင္ပြဲဝင္တစ္ဦးပဲ ျဖစ္ပါတယ္…ၿပီးခဲ့တဲ့ တပတ္က Myanmar Idol ၿပိဳင္ပြဲဝင္ေနရင္း ထက္အၪၨလီက ငယ္ငယ္တုန္းက ခြဲခြာခဲ့ရတဲ့ ဖခင္ျဖစ္သူနဲ႔ ျပန္ဆုံခ်င္တဲ့အေၾကာင္း မ်က္ရည္ေတြနဲ႔ ေျပာျပခဲ့တာ ပရိသတ္ႀကီးတို႔ မွတ္မိမွာပါခုေတာ့ ဝမ္းသာစရာသတင္းေလးတစ္ခု...
ပရိသတ္ႀကီးေရ မင္းသားေခ်ာေနမ်ိဳးေအာင္ကေတာ့ ပီျပင္ပိုင္ႏိုင္လြန္းတဲ့ သဘာဝဇာတ္႐ုပ္ေတြေၾကာင့္ ပရိသတ္ေတြရဲ႕ တခဲနက္အားေပးဝန္းရံမႈေတြကို အျပည့္အဝရရွိထားသူပဲ ျဖစ္ပါတယ္။က်ရာဇာတ္႐ုပ္ေတြကို ပီျပင္လြန္းတဲ့ သ႐ုပ္ေဆာင္မႈေတြေၾကာင့္ ေအာင္ျမင္ေက်ာ္ၾကားတဲ့ ျပည္သူခ်စ္အႏုပညာရွင္တစ္ဦးအျဖစ္ ရပ္တည္ေနသလို ၾကည္ႏူးစရာ မိသားစုေလးကိုလည္း ပိုင္ဆိုင္ျဖတ္သန္းေနသူ ျဖစ္ပါတယ္ေနာ္။ အႏုပညာအလုပ္ေတြကို ဆက္တိုက္လုပ္ေဆာင္ေနၿပီး ဇာတ္ကားေတြကိုလည္း ႐ိုက္ကူးေနကာ မၾကာခင္မွာ ႐ုံတင္ျပသေတာ့မယ့္ “ရပ္ေက်ာ္႐ြာေက်ာ္” ႐ုပ္ရွင္ဇာတ္ကားႀကီးမွာ...
စာဖတ်တိုင်း မမှတ်မိမဲ့အတူတူ ဘာလို့စာဖတ်နေတာလဲ ခေါင်းစဉ်လေးကသိပ်လှတယ်ဗျာ။ဘာတဲ့စာဖတ်တိုင်းမမှတ်မိမဲ့အတူတူဘာလို့ စာဖတ်နေတာလဲတဲ့။နည်းနည်းလေးတော့ခေါင်းစားသွားမယ်ထင်တယ်ဗျ။ ကျနော်လည်းတွေ့စကခေါင်းစားသွားခဲ့ပါတယ်။ဘာအဓိပ္ပါယ်လည်းပေါ့လူပျင်းတွေကိုများတိုက်တွန်းနိုးဆော်ထားတဲ့စာလားဆိုပြီးစိတ်ဝင်စားပြီးဖတ်ဖြစ်ခဲ့တယ်(ကိုယ်ကလည်းခပ်ပျင်းပျင်းကိုး)။ စာပုဒ်လေးကိုအဆုံးထိဖတ်လိုက်မှ နားလည်သွားတော့တယ်။သိပ်မှန်တဲ့ စာသားလေးဗျာ။ ကျနော်စာဖတ်တာဝါသနာပါပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျနော်စာဖတ်လိုက်တိုင်းရှေ့ကဟာဖတ်ရင်နောက်ကဟာမေ့နဲ့နောက်ကဟာဖတ်ရင်ရှေ့ကဟာမေ့နဲ့ သံသရာ လည်နေပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျနော့်ကိုယ်ကျနော်တွေးထင်ခဲ့မိတယ်ငါဟာအလွန်ညံ့တဲ့ကောင်ဘဲဘာမှသုံးစားမရတဲ့ကောင်ပေါ့။ဒါပေမဲ့ဒီစာပုဒ်လေးဖတ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာအားတွေတက်လာတယ် ခွန်အားတွေပြည့်လာတယ်ပြောရမယ်ဆိုရင်စာဖတ်ချင်စိတ်တွေများပြားလာခဲ့တယ်။ကျနော်ဖတ်ခဲ့တဲ့ပညာပေး စာပုဒ်လေးကတော့ တစ်နေ့တော့မြေးအဖိုးနှစ်ယောက်ဟာ ကမ်းစပ်မှာထိုင်ပြီးစကားပြောနေကြတယ်။မြေးငယ်လေးကသူ့အဖိုးကိုမေးလိုက်တယ်”ဖိုးဖိုး ဖိုးဖိုးနေ့တိုင်းစာတွေဖတ်နေတာဘယ်လောက်မှတ်မိသလဲ မေ့သွားမဲ့အတူတူဘာလို့စာဖတ်နေတာလဲ”တဲ့ဒီအချိန်မှာအဖိုးကသူ့မြေးလေးကို ပြုံးပြပြီး “ဟိုနားကမီးသွေးထည့်ထားတဲ့ ခြင်းကြားလေးသွားယူခဲ့စမ်းမြေးလေး” လို့ပြောလိုက်တယ်မြေးလေးလည်းနားမလည်စွာနဲ့ဘဲခြင်းကြားကိုယူခဲ့တယ်”ကဲ အဲ့ဒီခြင်းကြားနဲ့ မြစ်ထဲကရေတွေကိုခပ်ခဲ့ပါအုံးမြေးလေး”လို့ ပြောတယ်။ အဖိုးကအဲ့လိုပြောတော့မြေးကပိုပြီး ဇဝေဇဝါဖြစ်သွားတာပေါ့။ဒီခြင်းကြားနဲ့ ရေခပ်လို့ဘယ်လိုမှအဆင်မပြေနိုင်ဘူးဆိုတာသူသိနေတယ်လေ။ဒါပေမဲ့လည်း...
အဆိုေတာ္၊ ဒါရိုက္တာတစ္ဦးအေနနဲ႔ ပရိသတ္ေတြရဲ့အားေပးလက္ခံျခင္းကို အျပည့္အဝရရိွထားတဲ့ ယုန္ေလးကေတာ့ စိတ္ထားေကာင္ၿပီး အားနည္းသူကို ကူညီတတ္တဲ့ အႏုပညာရွင္တစ္ဦးပါ။ လတ္တေလာမွာေတာ့ ယုန္ေလးက ဇာတ္ပို႔သရုပ္ေဆာင္ေတြရဲ႕ခက္ခဲတဲ့ ဘဝေတြအဆင္ေျပေစဖို႔အတြက္ သူရြယ္ရြယ္ထားတဲ့အေၾကာင္းအရာေတြကို လူမႈကြန္ယက္မွာ ေဝမ်ွေပးထားတာ ေတြ့ရပါတယ္။ ယုန္ေလးကေတာ့ စိတ္ရင္းေကာင္းသူတစ္ဦးျဖစ္တာေၾကာင့္ မၾကာခဏဆိုသလို ခ်ိဳ႕တဲ့တဲ့ အႏုပညာရွင္တစ္ခ်ိဳ႕ကို အျမဲကူညီေလ့ရွိသူတစ္ဦးပဲ ျဖစ္ပါတယ္။...
တိတ်တဆိတ် စိတ်ဓါတ်ကျနေသူများတွင် တွေ့ရသည့် လက္ခဏာများ လူတစ်ယောက်မှာစိတ်ကျရောဂါရှိ၊မရှိကိုတော့အလွယ်တကူခြေရာခံလို့ရနိုင်ပါတယ်။ဒါပေမယ့်လည်းလူတစ်ယောက်မှာတိတ်တဆိတ်စိတ်ဓါတ်ကျတဲ့စိတ်ရှိနေ၊မနေဆိုတာကိုတော့အလွယ်တကူသိလို့မရနိုင်ပါဘူး။တကယ်လို့တစ်စုံတစ်ယောက်မှာတိတ်တဆိတ်စိတ်ဓါတ်ကျနေ၊မနေဆိုတာကိုဘယ်လိုသိနိုင်မလဲ.? သိခဲ့ရင်ရောဘယ်လိုကူညီပေးနိုင်မလဲ.? (1) ရွှင်လန်းတက်ကြွတဲ့ပင်ကိုယ်စရိုက်ရှိနေသူ စိတ်ဓါတ်ကျနေတာမျိုးကိုရွှင်လန်းတက်ကြွတဲ့ပင်ကိုယ်စရိုက်ရှိနေသူတွေထံမှာ တွေ့နိုင်ဖို့ အရမ်းကိုခက်ခဲပါတယ်လို့ Rochester Medical Center တက္ကသိုလ်မှသုတေသီတွေက ပြောပါတယ်။မိမိရဲ့အတွေးနဲ့စိတ်ခံစားချက်တွေကိုထုတ်ပြခဲလွန်းသူတွေ၊သူတို့ခံစားရတဲ့စိတ်ဓါတ်ကျခြင်းအကြောင်းကိုလွယ်လွယ်နဲ့ ထုတ်ပြကြမှာမဟုတ်ပါဘူး။အမြဲတမ်းစိတ်ဓါတ်တက်ကြွနေတဲ့သူတွေမှာစိတ်ကျရောဂါနဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးလို့တော့မတွေးသင့်ပါဘူး။ (2) ပြည့်စုံလွန်းတဲ့ ဘဝကို ပိုင်ဆိုင်ထားသူ တော်တဲ့ကလေးတွေရှိတယ်၊အရမ်းကောင်းတဲ့အသက်မွေးမှုလုပ်ငန်းရှိတယ်။ပျော်စရာကောင်းတဲ့အိမ်ထောင်ရေးရှိတဲ့ အိမ်ရှင်မတစ်ယောက်ရဲ့ဘဝကိုစိတ်ကူးနဲ့တွေးကြည့်လိုက်ပါ။ ဒီလူရဲ့ဘဝဟာပြီးပြည့်စုံလွန်းတယ်လို့ သင်ထင်ကောင်းထင်နိုင်ပေမယ့်သူ့ဘဝမှာလည်းနာကျင်စရာကိစ္စတစ်ခုတော့ရှိခဲ့မှာပါ။စိတ်ပညာရှင်တွေကတော့ဒါကို PHDP (Perfectly-Hidden-Depressed Person)လို့ခေါ်ကြပါတယ်။အပြင်ဘက်မှာတော့ယုံကြည်မှုအပြည့်၊ပျော်ရွှင်မှုအပြည့်ဖြစ်နေပေမယ့် အတွင်းစိတ်ထဲမှာတော့ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်နေတာ။ ၀မ်းနည်းစရာကောင်းတာကတော့ဒီလိုလူမျိုးမှာစိတ်ကျရောဂါခံစားရပြီဆိုရင် ဘယ်သူကမှသတိမထားမိ၊အားပေးစကားမပြောမိတာပါပဲ။ဒါကြောင့်ကိုယ့်သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ယောက်ကများ...
Lifestyle npmm kia - November 15, 2019
ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကာလက တိုက်လေယာဉ်တွေထုတ်လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းဟာ မဟာမိတ်တပ်ပေါင်းစုအတွက်အရေးပါတဲ့ လုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် လေတပ် ကိုအဓိကနေရာကနေ အသုံးပြုပြီးထိုးစစ်ဆင်လေ့ရှိတဲ့ အမေရိကန်နဲ့သူမဟာ မိတ်တွေ အတွက်ကတော့ တိုက်လေယာဉ်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းဟာ အလွန်ကိုအရေးပါတဲ့ နေရာကနေရှိနေတာဖြစ်ပြီး တစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့်မြှင့်တင်လာနိုင်တဲ့ လေတပ်နည်းပညာနဲ့ ကမ္ဘာစစ်ကြီးကို အနိုင်ပိုင်းဖို့အထိ ရည်ရွယ်ထားကြတာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ပုလဲဆိပ်ကမ်း လိုစစ်အခြေစိုက်စခန်းတွေကို ဂျပန်တွေရဲ့လျှပ်တပြတ်ထိုးစစ်နဲ့တိုက်ခိုက်ခံမှုနောက်ပိုင်း မှာတော့...
Lifestyle npmm - November 15, 2019